24 Fikrado Dheeraad ah oo loogu talagalay Dumarka - Fikirka farshaxanka ee Tattoos
Haddii ay dhacdo in aad ka fekereyso helitaanka tattoo, waxaad u baahan tahay inaad waqti iska dhigto si aad u raadiso naqshadaha tattoo sida shaati-sunta gabbaldayaha. Kuwani waa qaar ka mid ah tattoosyada ugu wanaagsan ee dhulka iyo sababtoo ah tani waa sababtoo ah qoraxdu waxay qurux badan yihiin waxayna leeyihiin wax badan oo muhiim u ah kuwa gashan.
Tattoo tafaasiil macnaha
Tattoo # dhejisku waa wax badan. Ubaxa waxaa loo yaqaan dhismaha wuxuuna noqon karaa xagaaga kuwa jecel cadceedda, calaamadda xagaaga ama xitaa qashinka. Waa ubax loogu talagalay qorraxda waxayna noqotey mid calaamad u ah horumarinta nolosha. Waxaa loo isticmaali karaa sida taajka, mar walbana waa la qori karaa qorraxda. Dadku waxay u qaataan calaamad muujinaysa daacadnimo, farxad, abuur, diirranaan iyo dhalaalid.
Qorraxda #tattoo waxaa lagu sawiri karaa qaabab badan iyo qiyaaso badan, kuwana waxay leeyihiin macnahooda. Waxaad tahay mid ka dhigan kara qorraxdaada socodka qorraxda ee muhiimka u ah qoto dheer oo laga yaabo inay ka fekeraan. Dadka qaarkood waxay ku daraan shay iyo xitaa farriimo taas oo ah tattoo-macnaheeduna waxay noqon kartaa. Dhaqamo badan ayaa sidoo kale leh macnaha gaarka ah ee ku saabsan gabbaldayaha. Tattoo wuxuu noqday mid ka mid ah kuwa ugu cad cad kuwa doonaya inay kiiskooda ku muujiyaan hab diirran. Iftiinka noloshu waxa uu ku faraxsan yahay in uu ku muujiyo jiritaanka meelo kala duwan. Qayb kasta oo jirka ah ayaa loo isticmaali karaa macnaha macmiilka.
1. Tattoos macmacaanka
2. Tattoo qorrax boodheer
Dumarka haweeneyda ah ee bawdada qorraxdu waxa ay noqotaa waxa qof walba jeclaan lahaa in uu leeyahay iftiin weyn oo ku xiran. Waxaa jira siyaabo fara badan oo aad ku heli karto boogaha gogol-qoyan ee qorraxda # ku habboon.
3. Tattoo armaajo
Isticmaalka tattoo-qorraxdu waxay noqotaa wax xiisa leh. Tani waa sababta oo ah habka loo isticmaalo qashinka qorraxda qorraxda loo yaqaan 'tattoo' ayaa ka dhigaya mid aan caadi ahayn.
4. Gacanta oo buuxa taatuuga qoraxda
Adigu waxaad tahay meesha aad ku degan tahay habka aad u buuxsamayso xabbadda qorraxdu u egtahay. Goonku waa maalmo marka qoobkaca qorraxdu ka soo baxdo aan lahayn wax saameyn gaar ah leh. Maanta, waxay la yimaadaan qaabab cajiib ah.
5. Tartoo garbaha qorraxdheer
Tartoo qorraxdu waa loo qoondeeyey si aan caadi ahayn u eegno oo haddii aadan weli hubin waxa la samaynayo garbaha, fiiri naqshad tattoo ah sidan oo kale hal-abuurka ayaa muujinaya.
6. Cute qoobkaca qorraxdheer
Ma aha qof kasta oo raadinaya naqshad jaban naqshadeynta. Cuntada dhirta gabbaldayaha waxay noqotaa waxa dumarka badani isticmaalayaan si ay u eegaan wax ka duwan.
7. Tartanka qorraxda qorraxda
Tattusist oo laga yaabo inuu sawir-qaadku sameeyo ayaa qayb muhiim ah ka ah tattoo. Way kugu adagtahay inaad hesho tattoo sidan oo kale ah haddii tattooistahaagu uusan aheyn mid xirfad leh sida aad filaysay qofka. Qaado tafaariiqda qorraxdheerka heerkulka xiga haddii aad raadinayso wax shicis ah.
8. Tattoo gabal gabal gabal gabal gabal gabalka ah
Waxaa jira tattooists badan oo online ah si aad u shaqaaleysiiso tattoo ubax jacayl ah. Habka ugu fiican ee lagu helo tattooist wanaagsan waa inaad weydiiso. Onlineka ayaa kuu suurogeliyay in aad u buuxiso tattooistaha ugu fiican ee aad ku sawirto jilicsanaanta sunta.
9. Dumarka qorraxdu waa tattoo
Markaad hesho tattooist xirfad leh si aad u sawirto ragga tattoo-qoyan, waxyaabahan soo socda ayaa ah waxa aad sameyn karto habeynta gabbal-geedaha iyo meeleynta tattoo-gaaga.
10. Tattoo qoraxda fudud
U fiirso naqshadeynta tattoo this iyo aad u aragto sida aad u bedeli kartaa naqshad gaar ah. Naqshadeynta tattoo-gaaga qorraxdheerta waa wax aad u baahan tahay inaad si fiican u tixgeliso ka hor intaadan helin sawir.
11. Tattoo qurux badan oo qurux badan
Tattoo qorraxdu waxay timaaddaa taakuleeyn iyo cabir kala duwan. Waxaa laguu tagay si aad u heshid naqshadeyntaada iyo habeyntaada. Naqshaduhu waa waxa lagaa rabo inaad soo qaadatid oo aad u oggolaato tattooistahaaga inuu fahmo waxa aad dhab ahaantii u baahan tahay si laguu caawiyo sidii aad u heli lahayd naqshad sidan oo kale ah.
12. Isku xidh dhar qorrax leh
Sameynta jilicsanaanta qorraxda qorraxda dhejiska ah ee aad adigu tahay tallaabada ugu horreysa ee lagu gaarayo qaar ka mid ah shaati-galada ugu wanaagsan dhulka. Tattoo sidan oo kale ah waa wax cajiib ah in la eego sababtoo ah qofka soo xushay naqshadeynta.
13. Dumarka quruxda gabbaldayaha
Mudanayaalku way jecel yihiin naqshadeynta tafaariiqda qorraxda. Markaad leedahay tattoo sida quruxsan sida tan, dadku waxay kuugu yimaadaan si ay u doortaan xulkooda iyo sidoo kale horumariyaan hal-abuurkooda iyagoo raadinaya dulqaad.
14. Tattoo qoraxda oo buuxa
Tattoo buuxa ee gabdhihiisa gabalka gabayga oo dhan waa la ixtiraami karaa marka la abuuro farshaxan wanaagsan. Goonku waa maalmaha ay dadku raadinayaan tattooska qorraxda oo aan si fiican loo helin. Waxaa jira boqolaal tattooists kuwaas oo diyaar u ah in ay tan ku soo aruuriyaan.
15. Beautiful qurxiyo gabbaldayaha quruxsan
Qodobka ugu muhiimsan waa in la tixgeliyo socdaalka quruxda leh ee quruxda badan leh waa habka ubaxa loogu qurxiyo jirka.
16. Tattoo tufaaxa quruxda leh
Tattoo quruxda badan leh ee quruxda leh ayaa kaa caawin doonta inaad u aragto sharaf iyo kulul.
17. Iska xaji tattoo qorraxdheer
Ma jiro gabadh weligeed oo isbarbardhigeysa isla marka shaashadda tafaariiqda qorraxdaba loo siiyo iyaga. Waxaa jira siyaabo badan oo aad adigu u heli karto gabbal-geedeedkaaga.
18. Dab-bakhti ah ubax qashin-qoyan
Fiiri quruxda badan sida tattoo-gaaga kulaylka ah ee aad ku qaadato heer kale oo xiiso leh garbahaaga.
19. Qosol leh tattoo qoraxda
Waxaa jira siyaabo badan oo midabo badan leh oo taatuugaagu aad u qurux badan yahay marka la sawiro. Waxaad xaqiiqdii jeclaan lahayd naqshadahan.
20. Haweeney tattoo qorrax leh
21. Jirka jirka oo buuxa qorraxdheer
Xulashada tattoo saxda ah sida garabka casriga ah ee tamarta dhaadheer ayaa kaliya kaa caawin kara inaad eegto jilicsan oo qabow.
22. Dumarka gabal gabal gabal gabalka dumarka
23. Sawir-qorax-qabe oo ku saabsan gacanta dumarka
24. Jacaylka tattoo qorraxda
Marka aad diyaar u tahay tattoo qorrax leh oo aad u fiican, u tag midka na tusaya sheekada jacaylka. Jacaylka Tattoo qorraxdu waxay qabataa badanaa fikrado marka jirku ku jiro.
Tags:tattoos ubax tattoos qorraxda
Joomatari TattoosDhaqdhaqaaqaTattoo Featherlaabto laabtanaqshadeynta mehnditattoos cagtakoi kalluunkawaxaa la dhajiyay tattoosgadaal u laabotattoos iskutallaabtafikradaha tattootattoos eagleshaatiinka shiidanTattoos WadnahaTartoo ubax badancalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahmuusikada muusikadasawirada malaa'igtawaxay jecel yihiin tattoostattoos gacantatattoos ubaxlammaanahatattoos qorraxdatattoo maroodigalibto libaaxgaraacista gacmahashimbir shimbirtattoo tilmaantattoos qoortatattoos saaxiib saxa ahTilmaamta jaalaha ahsawir gacmeedtaraagada kubbaddaku dhaji tattoostattoos moonsawirrada raggaTattoo infinitytattoostattoos qabaa'ilkatattoos taajkiisawirada gabdhahaarrow Tattootattoo biyo ahtattoo indhahahenna tattootattoos sleevetattoos qosol lehtattoo dheemantattoo ah octopusjimicsiga bisadaha